China Sea Cucumber Peptide fekitari uye bhizimisi | Huayan
Gungwa cucumber peptide idiki mamorekuru peptidi, inoburitswa kubva kune nyowani kana yakaomeswa gungwa cucumber neakanongedzwa bio-enzyme kugaya tekinoroji. Iwo ari kunyanya collagen peptides uye ane yakakosha yehove hwema. Uye zvakare, cucumber yegungwa zvakare ine glycopeptides uye mamwe anoshanda ma peptide. Izvo zvinoshandiswa zvine calcium inoshanda, monopoly-saccharide, peptide, gaka gaka saponin uye amino acids. Inofananidzwa necucumber yegungwa, gungwa cucumber polypeptide ine yakanaka physicochemical zvimiro senge solubility, kugadzikana uye yakaderera viscosity. Naizvozvo, iyo enzymatic hydrolysis yegungwa cucumber peptide ine bioavailability yakakwira kupfuura zvakajairika zvigadzirwa zvegungwa cucumber. Inoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvekudya uye zvehutano.
Chinyorwa Chinyorwa: nyowani nyowani kana yechisikigo yakaomeswa oyster
Ruvara: Chiedza cheyero kana poda yakasviba
Nyika: Upfu 、 granule
Kunhuhwirira: Hwema hunokosha hwehove
Mapuroteni: ≥ 80%
Nutritional ingredient: sea cucumber monopoly-saccharide, polypeptide, 18amino acids, yegungwa cucumber toxin, taurine, gungwa cucumber glycoside nezvimwe.
Cucumber yegungwa ine glycopeptides uye imwe inoshanda peptide, mamorekuru madiki poly-peptide ane zvakawanda zvinoriumba, ine yakanaka fizikikemikari zvimiro senge solubility, kugadzikana uye yakaderera viscosity. Icho chikafu chakaringana kune varwere vane chirwere cheshuga, hypertension, coronary moyo chirwere uye chirwere chepfungwa.
Pasuru: 10KG / Bag, 1bag / atorwa, kana customized
1 Rwisa kuneta, chengetedza ganda rakatsetseka uye rakasununguka, kunonoka kuchembera kwemuviri.
2 Kuvandudza hutachiona hwemuviri;
3 kudzikisa shuga yeropa, kuzivisa itsvo neropa rinovaka.
Ipa chigadzirwa kudzidziswa kwevatengi mukutengesa, tekinoroji uye musika, uye upe fomula technical technical rutsigiro uye zvigadzirwa zvevatengi.
4.Provide yakazara-nguva mushure-kutengesa masevhisi.
5.Originate kubva kune hutano Hainan Island, sarudza zvine hutano zvigadzirwa uye shandira nyika.
Pashure: Pea Peptide
Zvadaro: Soybean Peptide